जन्मघरको पिँढीमा डा. उपेन्द्र देवकोटा (फोटो र भिडियो) | Saajha Khabar
जन्मघरको पिँढीमा डा. उपेन्द्र देवकोटा (फोटो र भिडियो)
गोरखा : वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा.उपेन्द्र देवकोटा शनिबार पुर्खौली घर गोरखाको पालुङटार नगरपालिका ४ पण्डितगाउँ पुगेका छन्। न्यूरो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका देवकोटा अस्पतालबाटै हेलिकोप्टरमा पुर्खौली घर पुगेका हुन्।
हेलिकोप्टर ल्याण्ड भएको ठाउँबाट सात मिनेट स्टेचरमा बोकेर उनलाई घर पुर्याइएको थियो। देवकोटा गाउँ आउने खबर थाहा पाएपछि सयौँको संख्यामा सर्वसाधारण भेला भएका थिए।
पित्त थैलीको क्यान्सरका कारण गम्भीर बिरामी वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. देवकोटालाई शनिबार दिउँसो उनको जन्मघर ल्याइएको हो।
काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामै देवकोटालाई उनकै इच्छा अनुसार हेलिकोप्टरबाट गोरखाको आँपपिपल पण्डित गाउँस्थित जन्मघरमा ल्याइएको हो। घरको पिँढीमा उनलाई केही समय राखिएको थियो। उनले घरमा पुगेर सिस्नेधाराको पानी खाने इच्छा गरेपछि उनलाई गोरखा ल्याइएको हो।
उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी अपहरणका मुख्य अभियुक्तलाई १७ वर्ष कैद
डा. उपेन्द्र देवकोटाबारे कसरी फैलियो अफवाह ? कस्तो छ अवस्था ?
अस्पताल परिसरमा टहलिँदै डा. देवकोटा
डा. उपेन्द्र देवकोटालाई देख्दा… (भिडियो)
Previous: विदेशबाट लोन ल्याएर भए पनि देश विकास गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली
Next: विज्ञान पढ्नेले ११ र १२ कक्षामा गणित पढ्नु नपर्ने